Cudurada kalluunka | Kalluunka
Kalluunka waxaa ku dhaca cudurro Iyo sida xayawaanka oo dhan, kuwani waa la daaweyn karaa si looga hortago inay dhintaan ama xitaa laga hortago. Si aan caadi aheyn, mararka qaarkood waa lagama maarmaan in la aado dhakhtarka xoolaha si loo awoodo in si fiican loo daryeelo iyaga.
Mararka qaarkood dadka aaminsan yihiin in xayawaanadan aan la geyn karin dhaqtarka xoolaha iyo inkasta oo ay adagtahay, hadaad adeegsan karto adeegan. Goobtan waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan cudurada kalluunka inta badan caan ku ah xaalad kasta, nooc kasta iyo gaar ahaan la xiriirta nooc kasta oo biyo ah ama ha ahaato macaan ama cusbo.
Ma hilmaami karno inay tahay inaan daryeelno oo aan ka hortagno inay jiradaan, markaa macluumaadku waa hantida ugu fiican.
Markii aan haysanno quraaradda bulshada, mid ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee ugu waaweyn ee inta badan saameeya kalluunka ...
"Kalluunkeygu waa rogmaday, maxaan sameeyaa?"
Maaha markii ugu horreysay ee aan aragno kalluun is rogrogaya. Maya, waxa aan dhahayno looma ...
In kasta oo aan ku aragno kalluunkeena aquarium-ka, guud ahaan la ilaaliyo, kana fog wakiilada dibada, ugaarsadayaasha suurtagalka ah, iwm. Sidoo kale…
Nodulosis, cudurka fungal ee kalluunka
Kicinta daaqsinka maqaarka kalluunka iyo gudihiisa waa waxa aan u naqaanno nodulosis, ...
Dabaasha cudurka kaadiheysta
Kaadiheysta dabbaasha waa xubin qaab xiiran u eg, oo ka sarraysa inta badan xubnaha ...
Hexamite ee kalluunka discus
Hexamite waa protozzo oo si gaar ah u saameeya kalluunka discus. Hexamite wuxuu ka faa'iideysanayaa xaqiiqda ah in kalluunka ...
Ku dul-nooleyaal ku jira tetra
Cudurrada ugu muhiimsan ee kalluunka tetra ku dhici kara waa dulin. Gaar ahaan dulinka loo yaqaan Pleistophora ...
Sida loo aqoonsado kalluunka jiran
Inta badan kalluunka aan ku dhex haysanno quraaradda waxaad ku sheegi kartaa inuu xanuunsan yahay si fudud ...
Betta waa kalluun aad ugu nugul cuduro ama cuduro keena caafimaadka ...